Yekutanga Apple Music zviziviso inosvika | Ndinobva mac
Nguva yega yega Apple painogadzira chigadzirwa kana sevhisi, nguva pfupi ndiyo inopfuura kusvikira mavhidhiyo ashandiswa mu Keynote sezvitsva izvo zvinogadzirwa sekushambadzira kudana.
Nhasi tinogona kukuratidza mavhidhiyo ekutanga ekushambadzira akagadzirwa neApple kushambadza sevhisi yayo nyowani nefariro huru. Sezvaunoziva, iyo Apple Music yakarova nyika dzinopfuura zana muna Chikumi 30, pamwe kuburikidza neyekuvandudza kune iOS 8.4
Kwechinguva ikozvino Maitiro eshambadziro eApple anga achichinja kusvika pakuti izvo zvigadzirwa zvakaunzwa padyo-kumusoro hazvichaoneke, asi izvo zvinoitwa kutarisisa kushambadza pakushandiswa kwavo nevanhu, ndiko kuti, chinhu chevanhu zvakanyanya pakushandisa izvi zvishandiso.
Iye zvino neApple Music odhiyo yekushambadzira sevhisi chinhu chimwe chete chaitika uye sezvo iwe uchizokwanisa kuona mumavhidhiyo atinonamatira, iwo anobva kuCupertino amira uye zvakawanda zvekuita ona iro divi revanhu rekuti kuvepo kweApple Music kunorevei.
Heano matanho matatu matsva atiri kutaura nezvazvo:
Tiri kutotarisira kusvika kumakumi matatu uye kukwanisa kutanga nakidzwa nemwedzi mitatu yemahara iyo Apple iri kuzopa kune vese vashandisi vane Apple ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Yekutanga Apple Music zviziviso inosvika